Qaybta 3aad: Sooyaalkii & Halgan-siyaasadeedkii SNL (Xuska 60-Guurada 26kii Juun, 1960kii)
1939kii oo Riwaayaddii ugu horreysay ee Xajaaj Binu Yuusuf laga dhigay Boorame ayaa isla markaana laga aasaasay naadigii isboortiga ee Boorama. Naadigaasi ilaa qaar kale oo Jigjiga ka jiray ayuu la ciyaari jiray.
1941kii Radio Kudhu oo markii danbe u digo-rogtay Radio Hargeysa ayaa la furay oo saamayn la yaab leh ku yeeshay noloshii dadka. Wuxu horsed u noqday dhammaanba qaybihii: fanka iyo warbaahinta isaga oo aan ku koobnayn Somaliland bal se Soomaali oo dhan u adeegi jiray sidaana furihiisii ku noqday: HALKANI WAA HARGEYSA, RADIO SOOMAALI,
1945kii, Sheekh Bashiir Sh. Yuusuf Xaaji Xasan Fiqi oo Cadan ka soo noqday ayaa ciidan abaabulay oo go’aansaday in uu la dagaallamo gumeysigii Ingiriiska. Wuxu weerarkiisa ka bilaabay Guddoomiyihii Degmada Burco ee Ingiriiska ahaa.
Aasaaskii Ururkii Somali National Society (SNS):
Ku-sinnaan 1945kii ayaa magaalada Burco lagaga dhawaaqay Urur bulsho oo loogu wan-qalay ‘Somali National Society’ loona soo gaabsan jiray SNS.
Af-soomaali haddii aynu u rogno wuxu ku noqonayaa: Urur-bulsheedka Waddaniga ah ee Soomaaliyeed. Sida magacu tilmaamayo wuxu ahaa meel ay ku kulmaan bulshada waddaniga ahi oo ay ku gorfeeyaan danahooda iyo arrimaha aayahooga la xidhiidha. Waxa kale Xaruntaa loo adeegsan jiray kulammada maamulkii gumeysiga iyo madaxda bulshada mararka loo baahdo. Sida ka muuqatay dabciga iyo dhalanka odayaasha aasaasay oo ahaa indhihii dadka, xarumahaa lakabyadooda sare siyaasaddu kama ay muuqan. Haddana lama odhan karo waa ay ka madhnaayeen. Muuqaalka sare odayaasha ayaa ka muuqday, waxaana hoosta ka waday oo la shaqaynayay saraakiil dawladeed oo aan is-muujin jirin oo aynu tusaale u soo qaadan karno Yuusuf Xaaji Aadan, Cali Mire iyo qaar kale oo badnaa sida aan ka soo xigtay Xuseen Cabdillaahi Liibaan (Baakistaani) oo ka mid ahaa foolaadkii Xisbigii SNL.
Mar aan wareysanayay Axmed Jaambiir Kaahin oo ka mid ahaa raggii seeska u dhigay maamulkii Maxmiyaddii Somaliland, wuxu ii sheegay in SNStii gaadhay heer aan la tegin Saldhigyadii Bilayska ee iyada la iska soo ashkateeyo kalsoonidii lagu qabay awgeed. Waxa kale oo aynu tusaale nool u soo qaadan karnaa rug-caddaagii Maxamuud Jaamac Uur-doox oo maamulkii gumeysiga karraani u ahaan jiray markii danbena inta uu shaqadii iskaga tegay abaabulkii SNStii ka qayb-galay Xoghayihii Guud ee ugu horreeyayna noqday.
Ku-sinnaan 1945kii ayaa ururkii SNStii seeska loogu dhigay magaalada Burco wax raad ah oo qoran oo laga hayaa ama aan heli karayayna ma jiro. Xataa dadkii goob-joogga u ahaa ama xilliyadaa noolaa ayaan dad badani ka noolayn. Dedaal badan ayaan sameeyay si’ aan u soo ururiyo xogo baahidda qormadan inaga daboola.
Magacyo badan ayaan helay oo Degmooyinkii markaa jiray ka kala tirsanaa bal se dad la isku wada raacsan yahay ma ay ahayn. Waxaan ka wadi waayay in aan idiin soo dhigo Lajnaddii ama guddidii ugu horreysay ee Shirweynahaa aasaaska lagu oggolaaday. Qawl iyo qoraalba magacyadan waan ku helay, waxaanay kala ahaayeen:
Sida aanu siyaabo kala duwan odhaah ahaan iyo qoraalba u soo xigannay isla markaanaa uu Dr. Maxamed Sheekh Mukhtaar Xuseen digtooraadii uu kaga qalin-jebiyay Al-Azhar ku qoray, waxaanu halkan hoose idiin ku soo gudbinaynaa hoggaankii ugu horreeyay iyo Ujeeddooyinkii ururkii SNS
Muuse Cabdi Cilmi: Guddoomiye,
Maxamuud Jaamac Uur-doox: Xoghayaha Guud,
Sheekh Cabdillaahi Sheekh Ibraahin (Abu-site): Khasnajiga,
Aasaaskii SNStu sida badiba la isku raacsan yahay wuxu ahaa 1945kii in kasta oo ay jiraan dad aamminsan taariikho kale. Taasina wax la yaab leh ma aha oo waa mid u taal taariikhyahannada sidii ay meel wax isugu geyn lahaayeen, innaga se dedaal ina faran sidii aynu inta aan waqtigu inaga dhicin xusuusteenna u weelayn lahayn.
Ujeeddooyinkii Ururkii SNS oo koobani waxay ahaayeen:
In waddanka Soomaalida la mideeyo,
In awooddooda wax-soo-saarka Beeraha la kordhiyo,
In ay helaan xorriyad dhammaystiran oo ay wax ku sheegi karaan,
← Qaybta 2aad: Sooyaalkii & Halgan-siyaasadeedkii SNL (Xuska 60-Guurada 26kii Juun, 1960kii)
Qaybta 2aad: Sooyaalkii & Halgan-siyaasadeedkii SNL (Xuska 60-Guurada 26kii Juun, 1960kii)
Qaybta: 2aad Sayid Maxamed Cabdille Xasan: Guud ahaanba halgankii gobannimo-doonka ee Soomaaliyeed, gaar ahaanna kii Somaliland qof u holladay in uu ka hadlo oo aan Sayid Maxamed Cabdille iyo Daraawiishtii soo qaadini run xaajada kama sheegin. Maanta, iyada oo aanu…
Sooyaalkii & Halgan-siyaasadeedkii SNL
by admin • August 28, 2020
(Xuska 60-Guurada 26kii Juun, 1960kii) Arar: “Geeska dheeree Afriikiyo, Geedki Lowya-caddood, Gubankeediyo Oogo, Markaad mid gudubto, Mid gubtaad aragtaaye, Giddigood waa SNL,” Timacadde, Qalinka: Boobe Yuusuf Ducaale. Cankaabo@hotmail.com, cankaabo@gmail.com, www.dharaaro.net, Qaybta: 1aad Waa qormo inta qormo taariikheed koobnaan karto,…
Maxamed Ismaaciil Baa-sarce (Barkhad-cas)- 1930-1962